RASMI: Tababaraha Sannadka Ee Premier League & Kubada Cagta Ingariiska Oo La Magacaabay & Guardiola Oo LABO Jeer Guuldareystay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaRASMI: Tababaraha Sannadka Ee Premier League & Kubada Cagta Ingariiska Oo La Magacaabay & Guardiola Oo LABO Jeer Guuldareystay
RASMI: Tababaraha Sannadka Ee Premier League & Kubada Cagta Ingariiska Oo La Magacaabay & Guardiola Oo LABO Jeer Guuldareystay
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa loo magacaabay tababarihii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta tababaraha ugu fiican Ingariiska ee LMA oo loo bixiyay Sir Alex Ferguson Trophy.
Liverpool ayaa u tartantay hanashada horyaalka ilaa iyo maalintii ugu danbeysay iyagoo helay 92 dhibcood islamarkaana ay hal dhibic horyaalka uga qaaday Manchester City, waxayna Reds ku dhawaatay inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee Ingariis ah ee afar koob isku qaada.
Isagoo dib u eegis ku sameynayay xilli ciyaareedkii Premier League ee dhamaaday, Klopp oo aqbalaya abaalmarinta ayaa yiri: “Sharaf weyn ayay ii tahay, waxayna aheyd xilli ciyaareed waali ah. Kulamadii maalintii ugu danbeysay xilli ciyaareedka kaliya labo kulan ayaa micno darro aheyd inta kale wax uun ayaa loo ciyaarayay.
“Maalin walwal badan ayay aheyd, natiijadii aan rabnay ma aysan soo bixin laakiin durbaba waan iska ilownay. Marka aad abaalmarin sidaan oo kale ah ku guuleysato waxaad tahay labo mid midood: tababaraha ugu caqliga badan dunida ama tababare heysta shaqaalaha ugu fiican dunida – waxaa halkaan ila jooga afar ka mid ah shaqaalaheyga tababarka, waana ay ogsoon yihiin inta aan ka mahdinayo caawintooda.”
Klopp wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta Sir Alex Ferguson Trophy, taasoo ay u codeeyaan dhamaan tababaryaasha heerarka kala duwan ee kubada cagta Ingariiska. Sir Alex oo ku dhawaaqayay guuleystaha ayaa yiri: “Tani waa xunuun, runtii waa xanuun… Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay.”
Tababaraha Liverpool oo sii hadlayay ayaa yiri: “Abaalmarintaan ay ii codeeyaan dadka aan isku xirfada nahay waa mida ugu muhiimsan ee aan heli karo.
“Si guud ahaaneed ma ahi qof aaminsan abaalmarinta shaqsiyadeed, kubada cagta waa ciyaar kooxeed, wiilashaan la’aantood waxba ma aanan noqdeen. Waxaan wax walba u sameynaa si wadajir ah.”
Klopp ayaa labada abaalmarin ka qaaday tababarihii Manchester City u qaaday horyaalka Premier League ee Pep Guardiola.